SMPTE ၂၀၁၄ တွင် DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကို Artel ဗီဒီယိုစနစ်များပြသမည် NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ SMPTE 2014 မှာ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးစှမျးခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
WESTFORD, Mass - ။ စက်တင်ဘာ 30, 2014 - မှာ SMPTE 2014, တဲ 105, Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, JPEG 2000 ချုံ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို, ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယို-over-IP ကို, နှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး platform ပေါ်တွင်ဘက်ပေါင်းစုံ signal ကို routing ကိုစွမ်းရည်ပြပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးခင်ကအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, ကုမ္ပဏီရဲ့ JPEG, 2000 ဖြေရှင်းချက်ရိုးရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်အနိမ့်နေပါတယ်တဲ့နည်းပညာများနှင့် JPEG2 ၏ Standardization နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အလုပျအတှကျရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီနေဖြင့်အင်ဂျင်နီယာသူဟာ Emmy (R) ဆုချီးမြှင့် (J2000K) နဲ့ဂုဏ်ပြု ကုန်းကွန်ရက်များကိုဖြတ်ပြီးထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာပို့ဆောင်နဲ့ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်။
"JPEG, 2000 စီးပို့ဆောင်အသစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစံချိန်စံညွှန်းများထွန်းနှင့်အတူ ပို. ပို. ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် IP-based မီဒီယာကွန်ရက်များ အသုံးပြု. ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်" ဟုရစ်ချတ် Dellacanonica မှာသမ္မတကပြောပါတယ် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ။ "မှာ SMPTE DigiLink သည်ဤအသံလွှင့် application များအတွက်စုံလင်သောလျောက်ပတ်သည်အဘယ်ကြောင့် 2014 ကျနော်တို့ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ တက်ရောက်လာသည့် DigiLink ပလက်ဖောင်းရဲ့ပွိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရ, အသုံးပြုခြင်းနှင့် configuration ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုတခုအဖြစ်တံ့သော, တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသရုပ်ပြဘို့ငါတို့တဲအားဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ "
DigiLink လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်တပ်ဖြန့်ထားသည်။ ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အကျော်ကြား, DigiLink ချက်ချင်းဖြန့်ဝေဘို့ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်, ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အထိဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးတစ်ငါးနှစ်အာမခံအခမဲ့ firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အခမဲ့တစ်သက်တာနည်းပညာပံ့ပိုးမှု, ပါဝင်သည် သဘောတူညီချက်ကုန်ကျစရိတ်။
ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.artel.com.
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ IP ကိုတိုက်ရိုက်ဖိုင်ဘာအဘို့အထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်တယ်, optical network များနိုင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးကရှေ့ဆောင်, Artel ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပါကဗီဒီယို-over-ဖိုင်ဘာကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Artel အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကို configure နှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်အလွယ်ကူဆုံးပေး DigiLink မီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အခြေခံဖြေရှင်းချက်ပေးထားခဲ့သည်။ များထားရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူ, DigiLink အရေးပါဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာများကမ္ဘာ့အများဆုံးကြည့်ရှုအားကစား, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များကိုထောကျပံ့ဖို့ feeds မစ်ရှင်များအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် CATV အော်ပရေတာများကနေ့စဉ်အပေါ်သို့မှီခိုနေပါတယ်။
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ အသံလွှင်း DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း routing SMPTE 2014 2014-09-30
ယခင်: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ WFX 2014 မှာကိုးကွယ်မှုအဖွဲ့၏အိမ်အဘို့အ RF Solutions ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Range
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ HPA တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအင်ဂျင်နီယာ Excellence Awards ဆုပေးပွဲနှင့် HPA တရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို၏ 2014 Winners ကြေညာ